Inkonzo yokujika i-CNC-I-OUZHAN TRADE (SHANGHAI) CO., LTD
Ukuchaneka ngokwezifiso i-CNC yokuguqula inkonzo yeLathe-i-OEM / i-ODM i-China ye-CNC yokuTshintsha iiNxalenye zomenzi
I-Ouzhan ichanekile kwaye inamava Iinkonzo zokuguqula i-CNC umthengisi, umenzi, umrhwebi kunye nomthumeli kumazwe angaphandle eTshayina, ubesoloko eneemfuno ezizodwa ekunikezeleni ngobuchule Iinkonzo zokujika ze-OEM / ODM ezikumgangatho ophezulu kodwa ezingabizi CNC ukujika iindawo, Izahlulo CNC latheokanye izinto eziphezulu ezenziwe ngobuchwephesha ngoomatshini abaphambili kunye nokusebenza kwezandla kwezakhono. Ezifana namalungu emkhonweni, iinxalenye ipleyiti, iindawo shaft, washers, iibholiti, izixhobo umbhobho, njl
Yethu phambili Ukuguqula i-CNCamaziko kunye neenkonzo zesiko zixhasa iintlobo ngeentlobo zemathiriyeli, kubandakanya ubhedu, intsimbi engenasici, ikhabhon yentsimbi, ialuminiyam, ititanium kunye neeplastikhi. Siya kuhlala silungiselela eyona nkqubo ifanelekileyo yokujika, kwisiseko sokuhlangabezana nazo zonke iimfuno zakho, sinokunciphisa iindleko zakho ukuya kuthi ga ngoku. Isiko lethuIinkonzo machining CNC Soloko uqinisekisa ukuba abathengi bethu bafumana olona mgangatho uphezulu I-CNC yajika indawo kunye neenkonzo ezicinga kakhulu.
I-Ouzhan Precision CNC yokuXhobisa amandla kunye neempawu:
I-OuZhan inesakhono sokubonelela ngeendleko ezifanelekileyo zokuguqula iinkonzo ze-CNC kunye neemveliso ezichanekileyo eziphezulu zenani elikhulu leeprojekthi.
-Nkxaso ephantsi, ephakathi ukuya kwimveliso yevolumu ephezulu
Ukuprosesa okukhawulezayo kunye nokusetyenziswa kokugqibela
-Ukuchaneka okuphezulu, ukuvelisa ngesantya esiphezulu kunye nokuthembeka okuphezulu
Uluhlu olubanzi lwesinyithi kunye nezinto zeplastiki
-Umveliso onamandla kunye nexesha lokuhambisa ngokukhawuleza
-Ukugqitywa okufunekayo kunye nokunyamezelana okuqinileyo kuyafumaneka
Kutheni Khetha iOuzhan CNC Turning Services
1. Hi-Tech Izixhobo Equipment
Izixhobo zethu zokuvelisa ezingundoqo zingeniswa zivela eSwitzerland naseJapan, ezinokubonelela abathengi ngexabiso eliphantsi lokuguqula i-CNC.
2. Amandla emveliso e-CNC amaninzi
Ukongeza ekujikeni, sijolise ekugayeni, lathing, kusombiwa, CNC ukujika kunye neenkonzo zokugaya, ukuze ufumane ukhetho olukhulu lweenxalenye zomatshini ze-CNC kwiqela lethu elithembekileyo.
3. Amandla aQinisekileyo eR & D
Sineenjineli ezili-10 kwiziko lethu le-R & D, bonke ngoogqirha okanye oonjingalwazi abasuka kwiDyunivesithi yeSayensi neTekhnoloji yase China. Sinokunikezela ngoyilo lwe-CNC kunye neenkonzo zobunjineli ze-CNC.
4. Ulawulo loMgangatho olungqongqo (ISO 9001: 2008)
Sinabasebenzi abahlola umgangatho wobungcali kunye nezixhobo, ngokwemigangatho yamanye amazwe kwiimveliso zakho zokuvavanya, kwaye ukhuphe ingxelo yovavanyo eneenkcukacha yamalungu e-CNC.
5. I-OEM kunye ne-ODM yamkelekile
Ubungakanani ngentando kunye neemilo ziyafumaneka. Wamkelekile ukwabelana nge-2D yakho okanye i-3D imizobo yamalungu akho e-CNC kunye nathi, masisebenzisane ukwenza ubomi bube bukhulu ngakumbi.
Uluhlu loomatshini be-Ouzhan CNC
5-axis yokugaya iziko
4-axis yokugaya iziko
3-axis iziko lokusila
Isisili sendawo engenasiseko
Isitshixo sokutshiza kumatshini
Laser iziko lokumakishela
Yintoni iNkonzo yokuGuqula i-CNC kunye nendlela esebenza ngayo i-CNC Turning
Ukujika kwe-CNCivelisa iinxalenye ezineempawu zezilinda ngokususa izinto ezenziwe ngentsimbi okanye iiplastiki zisebenzisa izixhobo zokusika, iziko lokuzibhola okanye isixhobo esiphilayo. I-CNC Turning isebenzisa oomatshini abalawulwa likhompyuter ukwenza imveliso yokugqibela eyahlukileyo. Inkqubo isebenzisa isixhobo sokusika esinenqaku elinye esifaka ngokuhambelana nezinto zokusika. Izinto eziphathekayo zijikelezwa ngokutshintsha kwesantya kunye nokusika isixhobo esijikelezayo ukwenza ukusikwa kwesilinda ngemilinganiselo ngqo. Isetyenziselwa ukwenza isetyhula okanye ii-tubularshares ezivela kwizinto ezinkulu. Yinkqubo ezenzekelayo kwaye isantya sinokuba luhlengahlengiso ngokuchaneka okukhulu kunokujika i-lathe ngesandla.
Xa kufikwa kwinkqubo yokuguqula i-CNC, indlela yokuvelisa ethabathayo yenziwa ngokubanzi kwi-lathe ye-CNC okanye kwiziko lokujika. Ngaphambi kokusika, i-G-khowudi kunye nokuguqula umatshini kufuneka kulungiswe, emva koko ukhusele ibha engenanto yezinto zesitokhwe kwi-chuck yokuluka, i-chuck ibambe isiqwenga endaweni xa ujikelezisa edibanise. Xa ijikelezisa edibanise isantya ethile, indawo eyodwa-point CNC ukusika mgawuli uya kuhamba kwindlela yomgama ukuba ngaxeshanye kwi-axis ujikelezo kunye nokususa izinto ezigqithileyo, ukunciphisa ubukhulu ibhloko, ucacise ubukhulu kunye nokwenza entanjeni egudileyo, ukuba Fumana isiko lokugqibela i-CNC eguqukileyo kunye nengcaciso oyifunayo.
Izixhobo zokuguqula i-CNC-Izixhobo ezisetyenziselwa i-CNC Lathes
Ubumnene, ingxubevange kunye nesixhobo sensimbi
Isinyithi esithambileyo 1018
Isinyithi esithambileyo 1045
Isinyithi esithambileyo A36
Yenza ingxubevange yentsimbi 4140
Titanium kwiBakala 1
Yenza ingxubevange yentsimbi 4340
Titanium IBakala 2
Isixhobo sensimbi O1
Isixhobo sesinyithi A2
Isixhobo sesinyithi A3
Imagnesium AZ31B Magnesium AZ31B
Isixhobo sesinyithi D2
Isixhobo sesinyithi S7
Isixhobo sesinyithi H13
Izicelo ze CNC Ivula Iinkonzo kunye Izahlulo
Valve & umbhobho
Ukugqiba umphezulu we-Ouzhan CNC
Nalu ukhetho olubanzi lweenkonzo zokugqiba umphezulu wesinyithi ekukhetheni kwakho iindawo eziguqukayo ze-CNC zokuphucula indawo yokubonakala, ukuguda komphezulu, ukumelana nokubola, kunye nezinye izinto:
Njengomatshini (oqhelekileyo): ~ 125 RA µin (3.2 RA µm). Amanqaku esixhobo amancinci aya kubonakala kwicandelo.
I-Smoothed: Iinxalenye zenziwe ngomatshini kwinqanaba elincinci lokutya ukuze kufezekiswe uburhabaxa bomhlaba oyi- ~ 62.5 RA µin (1.6 RA µm). Uburhabaxa bomhlaba bunokwehliswa ukuya kuthi ga kwi-32 RA µin (0.8RAµm) xa uceliwe.
I-Bead Blast: Ukuqhumisa kwe-Bead kongeza i-matte efanayo okanye ukugqitywa komhlaba kwe-satin kwindawo eyenziwe ngomatshini, kususwe onke amanqaku ezinto ezisetyenziswayo. Isetyenziselwa iinjongo zobugcisa.
Clear I-Anodized Clear okanye Umbala: I-Anodizing yongeza ukutyabeka okucekeceke, okunzima, okungahambelaniyo ne-ceramic kumphezulu wamalungu e-aluminium, ukonyusa umhlwa kunye nokunxiba. Ifumaneka ngemibala eyahlukeneyo.
Hard I-Hardcoat ene-Anodized: I-Hardcoat anodizing ivelisa ukutyabeka okunamandla okwenziwe ngodongwe ukubonelela ngokubola okuhle kunye nokunxiba. yezicelo ezisebenzayo.
Co Powder Camera: Powder ukutyabeka wongeza umaleko obhityileyo olomeleleyo, banxibe umhlwa kunye ipeyinti Polymer enganyangekiyo kumphezulu inxalenye. Ifumaneka kuluhlu olukhulu lwemibala.
⑦ Ukucinywa kombane: Inkqubo yokubekwa kombane yinkqubo yombane esetyenziselwa ukupholisha, ukuhambisa kunye nokuhambisa izixhobo zentsimbi. Ku luncedo ukunciphisa ubunzima bomhlaba.
⑧ I-oxide emnyama: I-oxide emnyama sisambatho sokuguqula esisetyenziselwa ukuphucula ukumelana nokubola kunye nokunciphisa ukubonakalisa ukukhanya.
Coating Ingubo yokuguqula iChromate (Alodine / Chemfilm): Ingubo yokuguqula iChromate isetyenziselwa ukwandisa ukunganyangeki kwe-alloys zentsimbi ngelixa zigcina iipropathi zazo ziqhuba.
⑩ Ukuxubha: Ukuxubha kuveliswa ngokucoca isinyithi ngegrit ekhokelela kwisiphelo se-satin.